Balcad: Askar ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka oo Qarax lagu dilay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Balcad: Askar ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka oo Qarax lagu dilay
Balcad: Askar ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka oo Qarax lagu dilay
Muqdisho (Halqaran.com) – Askar ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka ayaa ku dhimatay qarax Talaadada maanta ka dhacay duleedka Degmada Balcad ee Gobolka Shabellaha Dhexe. Balcad waxay 30km u jirtaa Magaalada Muqdisho.
Gaari ay la socdeen Ciidanka Xoogga Dalka ayaa qaraxan lagula beegsaday inta u dhaxeyso Deegaanada Gololey iyo Qalimow, oo ku yaala inta u dhaxeyso Degmooyinka Balcad iyo Jowhar.
Qaraxan oo lagu diyaariyay wadada dhinaceeda ayaa waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho, dhaawac iyo burbur xoog leh oo ka soo gaaray gaarigii ay askarta la socdeen.
Wararka ayaa sheegaya in ku dhawaad shan askari ay ku dhimatay qaraxaasi, dhawr kalana ay ku dhaawacantay. Dhaawacyada ayaa loo qaaday Degmada Balcad.
Dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay in gaariga uu ka amba baxay Degmada Balcad, isla-markaana uu ku sii jeeday Qalimow, balse uu qaraxu haleelay intii aanu gaarin halkaasi.